Product echiche - Dongguan Yuechuang akpaaka Co., Ltd
Yue Chuang Product Concept
Ọgụgụ isi, oru oma na ike - Ka ụgbọala njikọ mmepụta ọzọ nwere ọgụgụ isi na oru oma, na-eme ka ụgbọ ala odi mfe na ndị ọzọ a pụrụ ịdabere na! The akpakanamde ụlọ ọrụ bụ ndị kasị ibu n'ụwa na nke kasị mkpa ọrụ, na-egosi a na-emekarị nke-eto ngwa ngwa, na nkà na ụzụ mgbanwe na ulo oru nwughari n'okpuru ndabere nke ngwa mmepe nke zuru ụwa ọnụ akpakanamde ụlọ ọrụ ga-akpali kwupụta interoperability, agagharị, onwe ịkwọ ụgbọala, ọrụ ahụmahụ na nnukwu data analysis.
Dị ka a àkwà mmiri ejikọta akpakanamde circuit, akpakanamde njikọ arụ ọrụ na dredging sekit na ịmafe na nke ugbu a na ụgbọala, na-eme na kọmputa engineering technology n'ọtụtụ ebe etinyere na akpakanamde ụlọ ọrụ, karịsịa n'ihi na akpakanamde ngwá electronic.
Na mmepe nke nkà na ụzụ ọhụrụ na ọhụrụ ume ugbo ala, na ejikọrọ ụgbọala na akpaka ịnya ụgbọ, ego nke data nnyefe na ọhụrụ nke ụgbọala na-akpa ike usoro na ihe exponential ibu, akpakanamde njikọ pụrụ ịdabere chọrọ na elu ugboro, elu voltaji na ugbu a na gburugburu ebe obibi bụ ihe na ndị ọzọ elu, miniaturization, nchekwa, pụrụ ịdabere, gburugburu ebe obibi nchebe bụ mmepe n'ọdịnihu ntụziaka nke akpakanamde njikọ.
Iji nweta nnukwu-ọnụ ọgụgụ uka mmepụta, njikọ mmepụta emeputa mkpa iji kwalite Standardization nke njikọ na usoro nke a na ulo oru mgbanwe.
Yue Chuang bụ ọkachamara akpakanamde njikọ akpaka nzukọ igwe suppliers, na 10 afọ nke ọgaranya ahụmahụ R & D na n'ichepụta ụlọ ọrụ, na onye nwere ọgụgụ isi, oru oma na ike ngwaahịa echiche, na-achịkwa nnọọ mmepụta àgwà, na-enye ahaziri ụgbọ ala njikọ nzukọ igwe akpaaka ahaziri ngwọta izute mkpa n'ezie nke mmepụta ụgbọ ala njikọ, njikọ aka Nsukka ime njikọ akpaaka mmepụta akara upgrade, oké ntuziaka oru, na mfe mmepụta usoro, anụ ngwaahịa mma, melite mmepụta arụmọrụ mma akpakanamde njikọ njikọ, na mmepụta arụmọrụ na competitiveness nke ụlọ ọrụ ..
Anyị ọhụụ bụ: ka ụwa mbụ na klas ụgbọ ala njikọ nzukọ igwe ika, mee akpakanamde njikọ mmepụta ọzọ nwere ọgụgụ isi na oru oma, na-eme ka ụgbọ ala odi mfe na ndị ọzọ a pụrụ ịdabere na! Nke a bụ ihe a anyị bịara na isi iyi nke ike anyị.
Nye elu ngwọta maka dum automaton njikọ maka ndị ahịa, na-anabatanụ ileta factory na kpakorita azụmahịa, anyị dị njikere maka mmepụta ụlọ ọrụ nke akpakanamde njikọta dozie nsogbu ndị tara akpụ, na-anabatanụ free alo na-arịọ maka upgrading na onye mmepụta akpaaka njikọ ngwọta.